China Wall ukukhanya ML1021 mveliso kunye nabenzi | Ukuzalwa
Ukukhanya okubonisa okuncinci okubandakanya ukwakhiwa kwentsimbi engenazingcingo kukalwe kwi-IP65 okwenza le mveliso ifaneleke ngaphakathi nangaphandle kwezicelo. Imveliso ikhokelela kwicala kwaye ke ilungele ukukhanya kwezixhobo ezijolise eludongeni okanye ngaphakathi kwiikhabhathi zokubonisa. Iglasi enomsindo Idibanisa i-CREE USA i-chip emhlophe emiselweyo kwi-1W okanye kwi-2W. Amandla asezantsi, akukho sisombululo sesondlo. Kukho iimodeli ezintathu zezibane zodonga. Kukho iindlela ezininzi zokuphatha isibane. Kwaye isiphatho sesibane sinokujikeleziswa ngesandla ukufezekisa umkhombandlela wokukhanya ofunwayo. Iihotele ezininzi zikhethe oku kulungileyo ngokuhombisa kunye nokukhanyisa. I-ML1021 yenziwe ngesibane esinye se-1W kunye nesiseko, ikwathotho losapho oluqulathe iML1021, PL021, PL023, kunye ne-PL026. Ungabona kwakhona ukubonakala kokuncinci ukuya kukhulu kwiphepha lasekhaya lewebhusayithi yethu ngokungaphezulu .. I-ML1022 kunye neML1022-30 zombini zenziwe ngesibane se-1W kunye nesiseko ngelixa i-ML1022-30 ine-30 degree tilt angle. Inika ukhetho lwe-angle ye-beam 20/60 kunye nemibala ekhanyayo: CW, WW, NW, Red, Green, Blue, Amber.
Umbala wokuKhanya I-CW, WW, NW, Bomvu, Luhlaza, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber
Amandla 1W / 2W
Ubungakanani N / A
Ubunzima N / A
Umgangatho we-IP IP65
Izicelo Ngaphakathi / Ngaphandle / Indawo yokuma komhlaba
ML102 WALL UKUKHANYA
ML1021 CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S20 / F60 Okwangoku I-350mA Uthotho 1W I-1.1M 2X24AWG Intambo 100LM D45X53 N / A
ML1022 CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S20 / F60 Okwangoku I-350mA Uthotho 2W I-1.1M 2X24AWG Intambo 200LM 35X75X56 N / A
ML1022-30 CREE I-CW, WW, NW, Luhlaza oBomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, Amber S20 / F60 Okwangoku I-350mA Uthotho 2W I-1.1M 2X24AWG Intambo 200LM 43X75X56 N / A
Egqithileyo Ukukhanya komthombo FL411
Okulandelayo: Isibane sodonga EU1808
Izibane zangaphandle zeDonga
Izibane zangaphandle zodonga lwangaphandle
Yangaphandle Wall Sconce Izibane
Ukukhanya komgca EU2009
Isibane sodonga EU1820